“အတွေးစလေးတွေ”: စိတ်ညစ်၊ စိတ်ပျက်၊ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါ . . .
လူ့ဘ၀ဆိုတာ ပန်းမွေ့ယာ၊ ရွှေကော်ဇော မဟုတ်တာကြောင့် အမြဲတမ်းတော့လည်း
ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေရမှာ မဟုတ်ပါ။ လူ့ဘ၀ကို စရောက်ကတည်းက အငိုနဲ့စခဲ့ရသလို လူ့ဘ၀ကနှုတ်ဆက် ထွက်ခွာချိန်မှာလည်း အငိုနဲ့သာ အဆုံးသတ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၀မ်းနည်းပူဆွေးစရာတွေဆိုတာ လူတိုင်း အတွက် ထူးဆန်းတဲ့ပြဿနာတွေ မဖြစ်သင့်ပါ။ စိတ်ညစ်စရာတွေဟာ ကြုံတွေ့နေကျအရာတွေမို့ မထူးဆန်းပေမယ့် အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သူတွေက ဒီပြဿနာကို ဘယ်လို ကျော်လွှားအနိုင်ယူကြသလဲ ဆိုတာတော့ ထူးဆန်းပါတယ်။
ကဲ । । . စိတ်ညစ်ခြင်းဒုက္ခကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြစို့လား . . .
၁။ ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲဘူးဆိုတာ အမြဲအသိရှိပါ . . .
လောကကြီးမှာ ဘယ်အရာမှ ထာဝစဉ်မတည်မြဲပါ။ သက်ရှိရော၊ သက်မဲ့ပါ မတည်မြဲကြပါ။ ဒီလိုပါပဲ ပျော်ရွှင်စရာတွေရော၊ စိတ်ညစ်စရာတွေပါလည်း အမြဲတည်ရှိနေနိုင်ကြမဲ့ အရာတွေမဟုတ်ပါ။ ပျော်ရွှင်စရာတွေ ပျောက်ကွယ်သွားကြသလို စိတ်ညစ်ဝမ်းနည်းစရာတွေလည်း တစ်နေ့နေ့မှာတော့ ပျောက်ကွယ်ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်ညစ်စရာတွေကုန်သွားမယ့်နေ့ကို ပျော်ပျော်ကြီးသာထိုင်စောင့်နေလိုက်ပါ။ စိတ်ညစ်ရတဲ့ တစ်နာရီကုန်သွားရင် ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့တွေ့ဖို့ တစ်နာရီပိုနီးသွားပြီဆိုတာ အမြဲအသိရှိနေရင် နေရထိုင်ရ ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
၂။ အားကစားစိတ်ဓာတ်မွေးပါ . . .
အားကစားသမားဆိုတာ ရှုံးနိမ့်မှုကြောင့် စိတ်ပျက်၊ အားငယ်တာတွေကို ခေါင်းထဲမှာ ကြာကြာထားလေ့ မရှိပါ။ နောက်တစ်ပွဲမှာ ဘယ်လိုနိုင်အောင်ကစားမလဲဆိုတာပဲ တွေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘ၀ကိုလည်း ကစားပွဲတစ်ပွဲလို့မြင်ထားပြီး အရှုံးနဲ့ကြုံတိုင်း နောက်တစ်ခါဘယ်လို အနိုင်ရအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားတဲ့အကျင့်ကောင်းလေး မွေးမြူထားရင် စိတ်ညစ်တာတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။
၃။ အရာတိုင်းကို အတွေ့အကြုံလို့သာ ယူဆထားပါ . . .
စီးဆင်းနေတဲ့ချောင်းထဲက တူညီတဲ့စမ်းရေကို နှစ်ခါထပ်ချိုးလို့ မရနိုင်ပါ။ ဒီလိုပါပဲ ဘ၀ဆိုတာလည်း တစ်လမ်းမောင်းဖြစ်တာမို့ နာရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့်တိုင်းကို နှစ်ခါတွေ့ကြုံဖို့လည်း လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် ဘ၀မှာ ကြုံရသမျှအရာအားလုံးကို အတွေ့အကြုံတွေလို့ မြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ပျော်စရာပဲတွေ့တွေ့၊ ၀မ်းနည်းစရာပဲကြုံကြုံ ထူးထူးထွေထွေ ခံစားရမှာ မဟုတ်တော့ပါ။ စိတ်ညစ်ဝမ်းနည်းစရာတွေကို အတွေ့အကြုံလို့ ယူဆနိုင်ရင် စိတ်ညစ်စရာတွေထဲကနေ သင်ခန်းစာယူစရာတွေပါ ရလာနိုင်တာကြောင့် အမြတ်ပါ ထွက်ပါလိမ့်ဦးမယ်။
၄။ အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်နေပါ । । .
အလုပ်နဲ့လက် မပြတ်လုပ်နေကြတဲ့လူတွေ ဘာကြောင့်ပျော်ရွှင်ကျန်းမာကြပါသလဲ။ ရှင်းပါတယ် စိတ်ညစ်ဖို့ မအားကြလို့ပါ။ အလုပ်များနေရင် ဘယ်စိတ်ညစ်စရာကိုမှ ခေါင်းထဲမှာ ကြာကြာမထည့်အားတာကြောင့် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံရင် ထိုင်မနေဘဲ အလုပ်မရှိအလုပ်ရှာပြီးသာ လုပ်နေလိုက်ပါ။ စိတ်ညစ်စရာတွေကို မေ့ပစ်ဖို့ထိုင်ပြီးကြိုးစားတာထက် ပိုပြီးအကျိုးများပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် စိတ်ညစ်စရာဆိုတာ မေ့ပစ်ဖို့ကြိုးစားလေ ပိုသတိရလေဖြစ်တတ်လို့ပါ။
၅။ ပျော်ပျော်နေတတ်သူတွေနဲ့ တွဲပါ . . .
စိတ်ညစ်တာရော၊ ပျော်ရွှင်တာပါ ကူးစက်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်စိတ်ညစ်နေချိန်မှာ စိတ်ညစ်တဲ့သူနဲ့ သွားတွဲမိရင် နှစ်ဆပိုပြီး စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ပြီး သူတို့ဆီက ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုယ့်ဆီကို ကူးစက်ပါစေ။ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းကို ချေမှုန်းနိုင်တာဟာ ပျော်ရွှင်တက်ကြွှခြင်းပဲဖြစ်တာမို့ ကိုယ့်ဆီကစ်ိတ်ညစ်စရာတွေ အဝေးကိုပြေးပါလိမ့်မယ်။
၆။ ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်ပါ . . .
စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာ မှန်ကြည့်ပြီး အားရပါးရပြုံးပြလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဟာသ၀ထ္ထုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ပြီး အားရပါးရရယ်လိုက်ပါ။ ပထမတော့ ခပ်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေနိုင်ပေမယ့် မကြာခင်ပျော်လာပြီး စိတ်ညစ်စရာတွေ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကိုယ့်စိတ်ကိုယ်လှည့်စားလိုက်ခြင်းပါ။ Auto suggestion ဆိုတာ မိမိကိုယ်ကို လှည့်စားခြင်းပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်လိုက်တဲ့အတွက် မျက်စိလည်သွားပြီး တကယ်ပျော်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
၇။ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် အော်ဟစ်လို့ရနိုင်တဲ့ နေရာကိုသွားပါ . . .
စိတ်ပျက်အားငယ်နေချိန်ဆိုရင် ရင်ထဲမှာ တင်းကျပ်နေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကို သက်သာစေတဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အားရပါးရအော်ဟစ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ လူနေကျဲပါးတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ မြို့ပြင်ထွက်ပြီး အားရပါးရအော်လို့ရပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာတော့ မဖြင်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် အားကစားပွဲဖြစ်ဖြစ်၊ စတိတ်ရှိုးပွဲဖြစ်ဖြစ် သွားပြီးအားပေးလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အဲဒီနေရာတွေမှာတော့ တရားဝင် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် အော်ဟစ်အားပေးနိုင်တာမို့ ရင်ထဲက တင်းကျပ်တာတွေ လျော့သွားပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ညစ်တာကို ပျောက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် အနောက်နိုင်ငံသားတွေအတွက်ပဲ သင့်တော်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ များပါတယ်။ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့ ကိုယ်တွေ့နဲ့ အများထောက်ခံ တားတဲ့ နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်လို့ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် သင့်တော်ပြီး၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်း ကိုက်ညီတာကြောင့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ညစ်၊ စိတ်အားငယ်ခြင်းတွေကို အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ကြပြီး ချမ်းမြေ့တဲ့ဘ၀ကို စာဖတ်သူအားလုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ . . . ။ ။
Posted by Han Kyi at 1:25:00 am
စိတ်ဓါတ်ကျတတ်လွန်းတဲ့ လူအတွက် တကယ့်ကို စိတ်အားတက်စရာဖြစ်နေလို့ ပါ။
30 July 2010 at 01:47
Romi Ro said...
စားသားကတော့ တကယ်ကောင်းပါတယ် အစ်ကိုရယ်
ဒါပေမဲ့ အခု အရမ်းစိတ်ညစ်နေတယ်...
အစ်ကိုပြောသလို ရယ်လိုက်ပေမဲ့ မျက်ရည်တွေက အလိုလိုဝဲလာတယ်...အရမ်းစိတ်ညစ်တယ်ဗျာ...
26 November 2012 at 04:20
Thank you ko gyi hangyi
boy lay said...
နဲ့စခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဗျာမ သေခင် အချိန်မှာတော့
ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအ ခြေ နေပဲ
17 January 2014 at 09:06
ချင်းတွေအကြောင်းလာဖတ်ရင်းနဲ့ ဒါလေးပါ ဖတ်သွားပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျနေလို့လေ။
၂၁ ရာစုက ကျွန်မတို့ မျိုးဆက်တွေ၊ စိတ်ထားမတတ်ကြတာလား၊ စိတ်ဓာတ်ကျစေတဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကပဲ များလွန်းနေတာလား ဆရာ..
22 February 2014 at 22:39